दशैँ, तलब र पत्रकार महासंघको गाईजात्रा – Media Kurakani
दशैँ, तलब र पत्रकार महासंघको गाईजात्रा
October 11th, 2012 Media Kurakani Archives
दशैँ आउन केही दिन मात्रै बाँकी छ । बजारमा चहलपहल सुरु भैसक्यो । किनमेल गर्नेहरुको भीडभाड छ चारैतिर । दशैँ उमंगको पर्व । तर ‘बिचरा’ पत्रकारका लागि ‘रुनु न हास्नु’ । कारण, अधिकांश मिडियामा काम गर्ने पत्रकार तलबबाट वञ्चित छन् ।
काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा एक हप्ताअघि भेटिएका एक पत्रकार निकै निराश देखिन्थे ।
‘खै म त यसपाली दशैँमा घर जान्न होला ।’ उनी भन्दै थिए ।
‘किन भन्नु अब । पैसा छैन । घर गयो, बेकारको जाउ आउ खर्चमात्र । बरु यतै बस्यो । अफिसले नै खुवाउँछ । ल्याउने लैजाने गर्छ । आनन्द ।’
उनी ‘नाम चलेको’ टेलिभिजनमा काम गर्छन् । तर चार महिना भयो तलब हात नपरेको ।
नियमित तलब पाउनेहरुलाई त काठमाडौंमा टिक्न धौ धौ छ भने तलब नै नियमित नपाउनेहरुको हालत कस्तो होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
श्रमजीवी पत्रकारका हकहितका चर्का कुरा गर्ने नेपाल पत्रकार महासंघलाई पनि पत्रकारले तलब नपाएको राम्रै जानकारी रहेछ । महासंघका महासचिव ओम शर्माले असोज २५ गते विज्ञप्ती जारी गरेका छन् । विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘विभिन्न सञ्चारगृहरु विशेषतः अधिकांश टेलिभिजनहरुमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकाररुले ३ महिनादेखि ९ महिनासम्म पारिश्रमिक नपाएको भन्ने गुनासा तथा तथ्यहरुले महासंघ गम्भीर बनेको छ ।’
यस्तो छ महासंघको विज्ञप्ती:
नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय कार्यसमितिका उपलव्ध पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको आकस्मिक बैठक महासंघका अध्यक्ष शिव गाउँलेको अध्यक्षतामा असोज २४ गते महासंघको कार्यालयमा बस्यो । बैठकमा श्रमजीवी पत्रकारहरुको अवस्थाका बारेमा गम्भीर छलफल भएको छ ।
विभिन्न सञ्चारगृहरु विशेषतः अधिकांश टेलिभिजनहरुमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकाररुले ३ महिनादेखि ९ महिनासम्म पारिश्रमिक नपाएको भन्ने गुनासा तथा तथ्यहरुले महासंघ गम्भीर बनेको छ । बैठकले दशैंका बेलामा श्रमजीवी पत्रकारहरुले तलब तथा दशैं खर्च नपाएमा गम्भीर कदम चाल्नुपर्ने ठहर गरेको छ । महासंघले सञ्चारगृहका सञ्चालकहरुलाई पटकपटक श्रमजीवी पत्रकार ऐन र न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिस बमोजिमको तलब भत्ता तथा सुविधा प्रदान गर्न आग्रह गरे पनि केही केही सन्चारगृह (विशेषतः निजी लगानीका टेलिभिजनहरु) ले उपेक्षा गरेकाले दबाबमूलक कदम चाल्न बाध्य हुनेछ ।
बैठकले तत्कालै पहिलो चरणमा टेलिभिजन सञ्चालक तथा लगानीकर्ताहरुसँग प्रेस रजिष्ट्रार र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिसहित पत्रकार महासंघले श्रमजीवी पत्रकारलाई तलब सुबिधा दिलाउनका लागि जरुरी छलफल गरी औपचारिक आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । दशैंअघि नै ती सञ्चारगृहमा पत्रकारहरुले तलब सुविधा पाए–नपाएको सम्बन्धमा पत्रकार महासंघ सहित सबै निकायको संलग्नतामा प्रत्यक्ष अनुगमनमा निस्कने र त्यसका लागि अनुगमन टोली गठन गर्ने निर्णय भएको छ । श्रमजीवी पत्रकार साथीहरुलाई गुनासा, उजुरी तथा तथ्यहरु सहित महासंघमा पेश गर्न पनि आग्रह गरिन्छ ।
पत्रकार महासंघको काम विज्ञप्ती निकाल्ने मात्र हो ?
महासंघ धेरैपटक गम्भीर बनेको छ । उसले धेरैपटक ‘गम्भीर छलफल’ गरेको छ । उसले ‘गम्भीर कदम’ चाल्नुपर्ने ठहर गरेको यो पहिलोपटक हैन । ‘दबाबमूलक कदम चाल्न बाध्य हुने’ महासंघको चेतावनी थोत्रो भैसक्यो ।
विज्ञप्ती राम्रोसँग हुर्नुहोस् त, श्रमजीवी पत्रकारलाई तलब सुबिधा दिलाउनका लागि जरुरी छलफल पश्चात औपचारिक आग्रह गर्ने रे । आफै भन्दै छ, ९ महिनादेखि पत्रकारले तलब पाएनन् । फेरी उही भन्दै छ छलफल गरी औपचारिक आग्रह गर्ने । कहिले गर्ने छलफल कहिले गर्ने औपचारिक आग्रह ? अनि कहिले पाउने पत्रकार ले तलब ?
महासंघ मिडिया मालिकहरुको माइक ?
फलानो फलानो मिडियाले पत्रकारलाई तलब दिएन भन्ने हिम्मत छ महासंघसँग ? महासंघ के हो ? अब यसको बारेमा गम्भीर बहस भएन भने यो पनि मिडिया मालिकहरुको माइक मात्रै हुनेछ । बाहिर जे भनिए पनि पत्रकार महासंघले आफ्नो पृष्ठभूमि र उद्देश्य बिर्सँदै गएको छ ।
व्यवसायिक र प्रेस स्वतन्त्रताका नाममा महासंघले मिडिया उद्योगलाई शोषण गृह बन्न दिने कि प्रेस स्वतन्त्रताका लागि रात दिन खटेर काम गर्ने पत्रकारहरुका पक्षमा उभिएर लड्ने महासंघले र स्वंय पत्रकारले पनि अब बोल्नु पर्छ । कुनै अमुक सञ्चार माध्यम बन्द भएर वा कुनै पत्रकारले पत्रकारिता पेशा छोडेर प्रेस स्वतन्त्रता रोकिन्न । यो आन्दोलन अनवरत रुपमा चलिरहन्छ तर यो आन्दोलनलाई सीमित व्यक्तिहरुले धेरै व्यक्तिहरुलाई शोषण गर्ने हतियार बनाउन दिने अनि पत्रकार महासंघ त्यसको मतियार हुने कि नहुने ?
नेपाल पत्रकार महासंघमा बसेका एमाले, माओवादी र काँग्रेसको कोटाबाट निर्वाचित भएका ‘व्यवसायिकता, क्षमता र ट्रेड यूनियन अधिकार’को वकालत गर्ने तर त्यसका लागि सिन्को नभाच्नेहरुले कति दिन त्यही कुराको रटान लगाइरहने ? व्यवसायिकता र ट्रेड यूनियनको कुरा गर्दा त्यहाँ श्रमको मूल्यको कुरा आउँछ अनि क्षमता हुनेले खान्छ भन्नेहरुले पत्रकारहको क्षमता अभिवृद्धिको लागि काम गर्छु भनेर आएको सम्झिनु पर्दैन ?
९ महिनासम्म तलब नपाउँदा पनि पत्रकार किन चुप ?
नेपालका अधिकांश मिडियामा कार्यरत पत्रकारले समयमा तलब नपाउनु नयाँ कुरा होइन । पत्रकारहरु स्वयं तलबको विषयमा त्यति कुरा गर्न रुचाउँदैनन् । तलब नपाएपनि ‘राम्रै छ’ भनेर गफ लगाउने हाम्रा पत्रकारको पुरानै रोग हो ।
पत्रकार ऋषिकेश दाहाल लेख्छन् –पत्रकारिता एक किसिमको नशा हो । यसमा छिर्यो कि हत्तपत्त मानिस बाहिरिन सक्दैन । बाइलाइन प्रेम, टेलिभिजनमा देखिने अनुहार र सस्ता लोकप्रियता । मुलुकका चिनिएका सानाठूला सबैसँगको उठबसले उसलाई पत्रकारिताबाट बाहिर निस्कन रोक्छ । समाजमा पत्रकार बन्दा पाएको ‘रवाफ’ले उसलाई तल ओर्लिन दिँदैन । र, यही भ्रममा उ महिनौ तलब नपाउँदा पनि रवाफिलो देखिन छोड्दैन । पाएभन्दा बढी तलब लिएको ‘धाक’ लगाउन उ नै सबैभन्दा अगाडि हुन्छ । (पढ्नुहोस्ः भात बाँड्ने पेशा होइन पत्रकारिता)
९ महिनासम्म पारिश्रमिक नपाउँदा पनि काम गर्ने पत्रकार कस्ता ? त्यो पनि नबोली ? तलब नपाएकोमा पत्रकारका बारेमा सहानूभति हुनु सामान्य कुरा हो तर यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । ९ महिनासम्म तलव नपाउँदा जीविका कसरी चल्छ ? उनीहरु किन पत्रकारिता गर्दैछन् ? पत्रकारिता कतै देखाउने बाटो मात्रै त होइन ? पत्रकार चुप लागेर बस्दा यस्ता थुप्रै प्रश्न उनीहरु माथि तेर्सिन्छन् ।
त्यसो त आलोचना सहने संस्कार पत्रकारहरुमा हुन्न । तर ‘आवाज विहीनहरुको आवाज’ हौँ भन्नेहरुले आफ्नो आवाज दबाउनुका पछाडी के कारण छ त्यो नबोल्ने हो भने उनीहरु पनि यी प्रश्नबाट मुक्त हुन सक्दैनन् ।
राज्यलाई कर तिर्दा कसरी हुन्छ प्रेस स्वतन्त्रताको हनन्?
एबीसी टेलिभिजन माओवादीको छानबिनमा »
« किन जल्यो ‘सेतो धरती’ ?